🥇 ▷ Apple Watch, 11 astaamood ayaa lagu ogaaday ThanksKit ✅
Apple Watch, 11 astaamood ayaa lagu ogaaday ThanksKit
WatchKit waxay soo bandhigaysaa muuqaalada qaar ee Apple Watch
Waxaan horeyba u ognahay in Apple dhowaan u diyaarisay soo-saareyaasha barnaamijka laga filayo ee WatchKit, oo ah aalad loogu talagalay in lagu horumariyo codsiyada loogu talagalay barnaamijka ‘smartwatch’ ee cusub ee Apple, the Apple Watch, oo hadda Thanks for this ay suurtogal tahay in la helo macluumaad xiiso leh oo ay na siinayaan tilmaamaha qaarkood ee ku saabsan astaamaha ay u egtahay in saacadda xariifka ah ee shirkadda California ay lahaan doonto.
Waxaa ka mid ah astaamaha qayb ka noqon doona smartwatch-ka soo socda ee Apple, Apple Watch, waxaan ku muujin karnaa waxyaabaha soo socda:
Waa lagama maarmaan in la haysto iPhone (ku dhawaad) markasta
Codsiyada aan ka heli doonno Apple Watch waxay noqon doonaan kuwo lagu dheereeyo kuwa laga heli karo aaladaha macruufka, runtiina dadka reer Cupertino ayaa kula taliyay soosaarayaasha iyada oo loo marayo dukumiintiyada ah in “Ku bilow qoritaanka codsiyada Apple Watch barnaamijyadi iOS ee jira”. Tani waxay si cad u tahay iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in ay tahay isla iPhone kaas oo bixin doona awoodda howsha lagama maarmaanka u ah shaqeynta saxda ah ee Apple WatchMoreover, howlaha kaliya ee aan u baahnayn faragelinta iPhone inay shaqeeyaan waa shaqooyinka saacadaha, sida taariikhda, saacadda iyo saacadda.
Codsiyada asalka ah ee Apple Watch waxay imaan doonaan sanadka soo socda
Iyada oo la adeegsanayo dukumintiga waxaa jira qayb muhiim ah oo tilmaamaysa in “Laga bilaabo sanadka soo socda, horumariyayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay u abuuraan codsiyada afka hooyo ee Apple Watch«.
Xalka shaashadda Retinda ee Apple Watch
Qaraarka loogu talagalay moodeelada Apple Watch 38mm wuxuu lahaan doonaa qaraar ah 272 x 340 pixels, halka nooca Apple Watch 42mm qalabka uu lahaan doono qaraar ah 312 x 390 pixels.
Apple Watch wuxuu ku imaan karaa cabirro kale
Nidaamka qalliinka ee joogi doona saacadda xariifka ah ee shirkadda Californian-ka waxay bixineysaa in waxyaabaha ku jira si firfircoon ay u buuxinayaan booska shaashadda, sida websaydhka jawaab-celinta ahi. Tani waxay u oggolaaneysaa suurtagalnimada abuurista moodooyinka smartwatch oo leh xallinno kale iyada oo aan la abuurin dhibaatooyin fara badan oo loogu talagalay soosaarayaasha dalabka.
Apple Watch waxay leedahay laba nooc oo ogeysiis ah
Nooca koowaad waa ogeysiiska “Muuqaal Muuqaal” oo la muujiyey waqti gaaban, kaas oo waayi doona markaad gacantaada kor u qaaddo. Nooca labaad ee ogeysiinta ayaa la shaqeynayaa marka isticmaalegu gacantiisa kor uqaado, isagoo si otomaatig ah ugu beddelaya «Long View», kaas oo ay suurtogal u noqon doonto in la arko macluumaad dheeri ah oo leh xulasho dheeraad ah oo loo habeyn karo.
Muuqaal deg deg ah
Soo saareyaashu waxay sameyn karaan shaashado u gaar ah oo aad ku gelin karto macluumaad taxane ah oo uu adeegsaduhu ku heli karo isagoo si dhaqso leh u eegaya shaashadda aaladda.
Maheli doontid tilmaamo shaqsiyeed oo noocaas ah
Muuqaalka isticmaalaha ayaa “lagu qufulan” wixii aad rabto Apple. Sababtaas awgeed, horumariyayaashu ma awoodi doonaan inay abuuraan nooc ficil ah oo shaqsiyeed si ay adeegsadayaashu ugu adeegsadaan qalabkooda.
Ku qasbi ikhtiyaar taabashada
Haddii cadaadis dheeri ah la isticmaalo waxay furi doontaa liis gaar ah oo ay ka mid noqon doonaan shaqooyinka qaarkood oo aan ka heli karno AirPlay.
Khariidadaha ayaa noqon doona mid aan rasmi ahayn oo aan is-dhexgal ahayn
Xirmooyinka astaamaha ee khariidadaha isku dhafan ayaa abuuri doona khariidado aan is-dhexgal lahayn, marka mabda ‘ahaan waxay u noqonayaan shaashadda. Suurtagal ma aha in lagu dhex lugeeyo dhaqdhaqaaqyada isla markaana jajabkii khariidaddu wuxuu ahaan doonaa sida shaashadda lafteeda. Waqtiga uu isticmaalaha guji khariiddada, wuxuu si otomaatig ah u furi doonaa Khariidadaha Apple
Taageerida sawirada laakiin ma ahan fiidiyoowga
Markay tahay Apple Watch Way suurta gal noqon doontaa inaad haysato kayd ilaa 20MB ah oo muuqaal ah si toos ah arjiga, si kastaba ha noqotee inta hartay oo dhan waxay si toos ah uga imaan doonaan iPhone. Caawinta fiidiyowga lama joogo, ugu yaraan hadda.
Apple Wuxuu soo saaray nooc cusub oo biyo ah oo loo yaqaan San Francisco.
Kuwani waa kuwa ugu weyn muuqaalada cusub ee Apple Watch ee Apple, kaas oo la filayo in la helo horaanta sanadka dambe.